Pôrtôrikàna No Ankamaroan’ireo Namoy Ny Ainy Tamin’ilay Vonomoka Tao Orlando · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2016 11:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Italiano, Español, Ελληνικά, Aymara, Deutsch, English
“Firaisankina manohitra ny habibiana.” Sary fanaingoana avy amin'ilay artista Kike Estrada, ho fanomezana voninahitra ireo niharan-doza tamin'ilay vonomoka tao Orlando. Nalaina tao amin'ny tranonkalany planetakike.com. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Vao tamin'ny ora voalohany taorian'ny nivoahan'ny vaovao momba ilay vonomoka tao Orlando, izay namonoan'ilay mpitifitra antsoina hoe Omar Mateen olona 49 sy naharatràna 53 hafa noho ny hetsika fankahalàna olona LGBTQ, dia nazava fa Amerikàna Latina no ankamaroan'ireo namoy ny ainy tamin'iny andro iny. Saingy tsy niandrasana ora maro, taorian'ny fanamarinana ny anaran'ny maro tamin'ireo niharan-doza, hoe mazava fa Pôrtôrikàna ny ankamaroan'ireo Latinas sy Latinos — 23 tamin'ireo 49 maty.
Raha nanoratra ho an'ny 80 grados, ilay tranonkalam-baovao tsy mikatsaka tombony ara-bola , nohazavain'ilay Pôrtôrikàna pelaka mpikatroka mafàna fo, Yoryie Irizarry, ny antony ahatsapàna lalina kokoa ny hirifiry naterak'ireny fahafatesana ireny eny anivon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ :
Tany amboalohany fony tsy mbola nohamafisina ny fiaviana ara-poko sy kolontsain'ireo niharan-doza, i Nelie Lebrón Robles, mpampiasa Facebook dia nanao izao fanamarihana mampihetsi-po manaraka izao momba ny zoro mbola tsy voatrandrak'ireo mpilaza vaovao mahazatra, tamin'ny fotoana nanoratana azy ity:
Voamarina ny antony nanosika an'i Mateen, ary izay fantatra dia manome sary manahirana. Hatreto, tsy misy porofo milaza fa teo ambany fibaikoan'ny vondrona mpanao asa fampihorohoroana i Mateen, na dia efa nisy fanadihadiana momba azy aza nataon'ny FBI noho ny filazana azy ho nanana fifamatorana tamin'ireo vondrona toy ny ISIS, ny mandatehezana al Nusra (rantsan'ny al Qaeda) ary ny Hezbollah. Saingy, araka izay efa navoitra, mampiasa saina ihany io satria tsy mifanara-tsaina ireny vondrona ireny. Mino ireo manampahefana fa ny fanazavana mety ho azo raisina dia i Mateen izy tenany no nisafidy ny ho radikaly.
Ireo olona nahafantatra azy no nilaza tamin'ny mpanao gazety fa nanana olana amin'ny resaka hatezerana sy fankahalàna pelaka, fanavakavahana ary tsy fitiavana vehivavy izy. Na izany aza, imbetsaka i Mateen, no efa hita tao amin'ny Pulse, ilay toerana fandihizana amin'ny alina, tany aloha tany, ilay toerana nisian'ny fitifirana, klioba malaza ho an'ireo pelaka. Voalaza ihany koa fa nampiasa ilay fampiasa hifanaovan'ny pelaka fotoana izy, hilazana fa angamba ny fifanoherana anaty tao aminy momba ny ara-pananahany no ampahany nitarika azy hanao herisetra mahatsiravina tahaka izany.